Talk:မြန်မာဘာသာစကား - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ မြန်မာဘာသာစကား vs ဗမာဘာသာစကား
၂ စာအရေးအသားများ ပြင်ဆင်ရန်
၃ Burmese English Learning materials
၄ Western Studies of the Burmese language
မြန်မာဘာသာစကား vs ဗမာဘာသာစကား[ပြင်ဆင်ရန်]
သမိုင်းကြောင်းအရာတော့ အငြင်းမပွားလိုပါဘူး။ လောလော ဆယ် အများလက်ခံထားတာရယ် တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာရယ်က မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဗမာ လူမျိုး မဟုတ်လား ခင်ဗျား။ ဒီတော့ မြန်မာပြည်က ဗမာလူမျိုးတွေသုံးတဲ့ ဗမာ ဘာသာစကား ဆိုပိုပြီး တိကျမယ်ထင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ Wiki မှာလဲ နိုင်ငံကို Myanmar, ဘာသာစကားကို Burmese Language လို့ပဲ သုံးတာဆိုတော့ ဗမာဘာသာစကား က ပိုကောင်းမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ Yarzaryeni (ဆွေးနွေး) ၁၀:၅၉၊ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)
Technically အရ ဗမာစကားဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ တရားဝင်နာမည်ကတော့ မြန်မာဘာသာပဲ ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ Preceding unsigned comment added by Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး)
ဘာကြောင့် မြန်မာဘာသာက ပိုအဆင်ပြေတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်လေး သိချင်ပါတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာတွေက ရှေ့နောက် မညီဖြစ်နေတာ သိသိနဲ့ ရေးနေရတာ တော်တော် အဆင်မပြေဘူးဗျာ။ ဥပမာ Tibeto-Burman Languages ကို တိဗက်-မြန်မာနွယ်ဘာသာစကားများ လို့ပြန်ရင် Technically လုံးဝမှားသွားပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံက ဗမာလူမျိုး၊ ကရင်လူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ ဘာသာစကားဟာ တိဗက်-ဗမာနွယ် ဘာသာစကားများ ဖြစ်တယ် လို့ပြောမှ မှန်တယ်။ နောက် ဆက်ပြီးရေးရတဲ့အခါ ဗမာလူမျိုးတွေပြောတဲ့ မြန်မာဘာသာစကား ဆို ရှေ့နောက်မညီဘဲ သုံးနေရပြန်ကော။ အတော်ဆိုးပါတယ်။ ကျွန်တော်က မြန်မာ/ဗမာ ဘယ်ဟာကို လိုလားတယ် ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ တစ်ခုခုကို တိတိကျကျ စံနှုန်းသတ်မှတ်ပြီး ရှေ့နောက် ညီညွှတ်စွာ ရေးချင်တာပါပဲ။Yarzaryeni (ဆွေးနွေး) ၀၃:၄၄၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)
Comment: English Wiki မှာ Burma ကနေ Myanmar ကိုပြောင်းတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ နိုင်ငံနာမည်ပြောင်းသွားပေမဲ့ adj နဲ့ denonym ဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုတာ သဘောတူညီချက် မယူရသေးပါဘူး။ မြန်မာဝီကီမှာ အချိန်ယူဆွေးနွေးပြီးမှ သဘောတူသူများမှသာ ပြောင်းလဲစေလိုပါတယ်။ ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၂:၃၁၊ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)
ကနေဒါမှာ ပြင်သစ်စာကို ရုံးသုံးဘာသာစကား သုံးတယ်၊ နိုင်ငံနာမည် ဘာဖြစ်နေနေ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေရဲ့ ဘာသာစကားမို့ ပြင်သစ်ဘာသာစကား လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးမှာ ပေါ်တူဂီ ဘာသာစကားကို သုံးတယ်။ နိုင်ငံနာမည် ဘာဖြစ်နေနေ ပေါ်တူဂီ ဘာသာစကားကို သုံးတယ်လို့ပဲ ပြောပါတယ်။ ကိုလံဘီယာ၊ ဗင်နီဇွဲလား၊ ပီရူး၊ ကိုစတာ ရီကာ နိုင်ငံတွေမှာ စပိန်ဘာသာစကား သုံးတယ်၊ စပိန်ဘာသာစကား လို့ပဲခေါ်တယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ ပွိုင့်က နိုင်ငံနာမည်ဘာဖြစ်နေနေ ဗမာလူမျိုး တွေရဲ့စကားကို ဗမာစကား လို့ ခေါ်မှသာ သဘာဝကျ မှန်ကန်မှာပါ။ ဘာသာစကားကို နိုင်ငံနာမည်ကို အသုံးပြုခေါ်ဝေါ်နေတာဟာ သာမာန်ကိစ္စတွေမှာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် တိတိကျကျ ရေးဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ ပြဿနာ ရှိလာပါတယ်။ အများသဘောဆိုရာမှာ အကြောင်းပြချက်မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန္ဒတွေကို ဘေးဖယ်ပြီး ဘာကြောင့် ဘယ်လို ဖြစ်သင့်တယ် ဆိုတာမျိုး အကြောင်းအကျိုး၊ အကောင်း အဆိုးတွေကို ဆွေးနွေးပြီး အဖြစ်သင့်ဆုံးကို ရွေးချယ်စေလိုပါတယ်။Yarzaryeni (ဆွေးနွေး) ၀၄:၁၅၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)
အရင် အစိုးရတွေလက်ထက်မှာ Ethnology နဲ့ပက်သက်ပြီး အတော်ဆိုးတဲ့ အမှားတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဗျ။ အင်းသားနဲ့ဓနု(ဗမာနွယ်)၊ ပအို့(ကရင်နွယ်)နဲ့ ဝ(မွန်နွယ်) တွေကို ရှမ်းလူမျိုးစု အောက်မှာထည့်တယ်၊ နာဂ(သီးခြားမျိုးနွယ်) ကို ပါးရဲထိုးတဲ့ ဓလေ့တူတာနဲ့ ချင်းလူမျိုးစုအောက်မှာ သွားထည့်တယ်၊ ဆလုံ(မလေးနွယ်) ကို ဗမာလူမျိုးစုအောက်မှ ထည့်တယ်၊ ဗမာ လူမျိုးပါလို့ပြောပြီး စာကျတော့ မြန်မာစာ ဆိုပြီး ကျောင်းမှာသင်တယ်။ လူမျိုးစုခွဲတာ မှားတဲ့ကိစ္စက နားမလည်လို့ ဒါမှမဟုတ် ပြီးစလွယ်လုပ်တယ်လို့ ယူဆစရာ ရှိတယ်။ ဗမာလူမျိုးပါ ဆိုသူတွေရဲ့ စာကို မြန်မာစာလို့ အမည်တပ်ပြီး သင်ကြားတာကတော့ တိုင်းရင်းသားခြင်းအတူတူ ဗမာစာကိုသာ တဖက်သတ်သင်ကြားပြီး အခြားတိုင်းရင်းသား ဘာသာတွေ သင်ကြားခွင့် မပြုတာကို ဖုံးကွယ်ချင်လို့ တမင်တကာ လုပ်တာ။ ဦးနေဝင်းကစလို့ မသမာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ချမှတ်ခဲ့တဲ့ အမှားကြီးတွေကို တွယ်ဖက်မနေသင့်ဘူးလို့ပဲ ပြောချင်တယ်ဗျာ။ Yarzaryeni (ဆွေးနွေး) ၀၃:၄၄၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)
ဘဒိုပြောတာ လက်ခံပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရုံးသုံးဘာသာစကားက သေချာပြောရရင် ဗမာစကားပါ။ ဒါကို တရားဝင်အဖြစ် အရင်အစိုးရကတော့ မြန်မာဘာသာလို့ သုံးခဲ့တာပါ။ လိုရင်းကတော့ ဗမာပြည်ကနေ မြန်မာပြည်ဆိုပြီး ပြောင်းလိုက်တော့ ဗမာစာကိုလည်း မြန်မာစာလို့ ပြောင်းလိုက်တာထင်တာပဲ။ ဗမာစာဆိုရင် အခြားတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မဆိုင်သလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးရေးအတွက် ဗျူဟာတစ်ခု ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့လေ။ ဘယ်တိုင်းရင်းသားမဆို နိုင်ငံခြားရောက်ရင် မိမိကိုယ်ကို မြန်မာလို့ ပြောသလို ဘာသာစကားအနေနဲ့ မြန်မာဘာသာကို ပြောဆိုပါတယ်လို့ပြောရင် technically အရ မမှန်ပေမယ့် ယေဘုယျကျတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုနကလို တိကျတဲ့ စာပေဆောင်းပါးကိုတော့ ဗမာလို့ သုံးရမှာပါ။ မြန်မာဘာသာလို့ အသုံးပြုတာ Official ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဗမာစာလို့ပြောလိုက်ရင် (ရိုးသားစွာ ပြောရရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ထဲဘဝင်မကျမိပါကြောင်း) အခြားတိုင်းရင်းသားတွေလည်း ဘဝင်မကျတာမျိုး ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အခြား မန်ဘာတွေရဲ့ အမြင်များကိုလည်း တွေ့လိုပါသေးတယ်။ Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၀၅:၂၀၊ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၁၆ (UTC)
အချိန်ရရင် ကူပြင်ပေးကြပါဦး။ မြန်မာသာသာစကားကို မြန်မာလို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့် ရှင်းလင်းထားတာ တချို့နေရာမှာ ဘာရေးထားမှန်း နားမလည်လို့ အင်္ဂလိပ် ဝီကီကို ပြန်မှီငြမ်းနေရတယ်။ :P ဇာမဏီ ၁၉:၃၀၊ ၁၉ ဖေ​ဖော်​ဝါ​ရီ​ ၂၀၁၁ (UTC)
Burmese English Learning materials[ပြင်ဆင်ရန်]
English Burmese dictionaries (to help Burmese speaking people learn English)
Burmese english Dictionaries (to help English speaking people learn Burmese)
Grammars of Burmese
Elementary hand-book of the Burmese language (1898)
Burmese self-taught (in Burmese and Roman characters) with phonetic pronunciation. (Thimm's system.) (1911)
The Anglo-Burmese student's assistant. Consisting of grammatical notes with numerous examples and analysis of sentences (1877)
A catalogue of the Burmese books in the British Museum (1913)
A Grammar of the Language of Burmah By Thomas Latter
Ralph Fitch, England's Pioneer to India and Burma: His Companions and Contemporaries, with His Remarkable Narrative Told in His Own Words By Ralph Fitch
Buddhaghosuppatti, Or, The Historical Romance of the Rise and Career of Buddhaghosa edited by James Gray
၂၂:၄၃၊ ၁၁ မတ်​ ၂၀၁၄ (UTC)
Western Studies of the Burmese language[ပြင်ဆင်ရန်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk:မြန်မာဘာသာစကား&oldid=390307" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈၊ ၀၄:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။